Luk 7 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
7 Mgbe o kwusịrị okwu ya niile ná ntị ìgwè mmadụ ahụ, ọ banyere Kapaniọm.+
2 Otu onyeisi ndị agha nwere ohu nke ahụ́ na-enye nsogbu, bụ́ onye ọ hụrụ n’anya nke ukwuu. Ọ nọkwa n’ọnụ ọnwụ.+
3 Mgbe ọ nụrụ banyere Jizọs, o ziri ndị okenye ndị Juu ka ha gakwuru ya wee rịọ ya ka ọ bịa mee ka ahụ́ dị ohu ya mma.
4 Ndị ahụ bịakwutere Jizọs wee malite ịrịọsi ya arịrịọ ike, sị: “O ruru eru ka i meere ya ihe a,
5 n’ihi na ọ hụrụ mba anyị n’anya,+ ọ bụkwa ya wuuru anyị ụlọ nzukọ.”
6 Ya mere, Jizọs sooro ha gawa. Ma mgbe ọ bịarutewere ụlọ ahụ nso, onyeisi ndị agha ahụ ezipụwo ndị enyi ya ka ha gwa ya, sị: “Nna anyị ukwu, enyela onwe gị nsogbu, n’ihi na ekwesịghị m ka ị bata n’ụlọ m.+
7 N’ihi nke ahụ, echeghị m na m ruru eru ịbịakwute gị. Kama kwuo okwu, ka a gwọọ onye na-ejere m ozi.
8 N’ihi na mụ onwe m kwa nọ n’okpuru ikike mmadụ, m nwekwara ndị agha nọ n’okpuru m, m na-asị onye nke a, ‘Gawa!’ ya agawa, m na-asịkwa onye nke ọzọ, ‘Bịa!’ ya abịa, m na-asịkwa ohu m, ‘Mee nke a!’ ya emee ya.”+
9 Ma mgbe Jizọs nụrụ ihe ndị a, ihe banyere nwoke a tụrụ ya n’anya, o wee tụgharịa chee ìgwè mmadụ na-eso ya n’azụ ihu wee sị: “Ana m asị unu, Ahụbeghị m okwukwe dị ukwuu otú a ọbụna n’Izrel.”+
10 Mgbe ndị ahụ e zipụrụ lọghachiri n’ụlọ ahụ, ha hụrụ na ahụ́ adịla ohu ahụ mma.+
11 Ozugbo nke a gasịrị, ọ gawara obodo a na-akpọ Nen, ndị na-eso ụzọ ya na oké ìgwè mmadụ sokwa ya na-eme njem.
12 Ka o rutere nso n’ọnụ ụzọ ámá obodo ahụ, lee! e nwere onye nwụrụ anwụ+ a na-ebupụ, bụ́ nwa nwoke nne ya mụrụ naanị ya.+ E wezụga nke ahụ, ọ bụ nwaanyị di ya nwụrụ. Ìgwè mmadụ dị ukwuu ndị si n’obodo ahụ sokwa ya.
13 Mgbe Onyenwe anyị hụrụ ya, o nwere ọmịiko+ n’ebe ọ nọ, o wee sị ya: “Kwụsị ịkwa ákwá.”+
14 O wee garuo nso ma bitụ ihe ahụ e ji ebu ozu aka, ndị bu ya wee guzoro n’otu ebe, o wee sị: “Nwa okorobịa, ana m asị gị, Bilie!”+
15 Onye ahụ nwụrụ anwụ wee bilie nọrọ ọdụ ma malite ikwu okwu, o wee kpọnye ya nne ya.+
16 Egwu+ wee jide ha niile, ha malitekwara inye Chineke otuto, na-asị: “E mewo ka onye amụma dị ukwuu+ bilie n’etiti anyị,” na-asịkwa, “Chineke echewo ihu ya n’ebe ndị ya nọ.”+
17 Akụkọ a banyere ya wee gbasaa ruo Judia dum na ógbè niile gbara ya gburugburu.
18 Ma ndị na-eso ụzọ Jọn kọọrọ ya banyere ihe ndị a niile.+
19 Ya mere, Jọn kpọrọ mmadụ abụọ n’ime ndị na-eso ụzọ ya ma zie ha ka ha gakwuru Onyenwe anyị, sị ya: “Ọ̀ bụ gị bụ Onye ahụ nke Na-abịa, ka ànyị ga-atụwa anya onye ọzọ?”+
20 Mgbe ndị ikom ahụ bịakwutere ya, ha sịrị: “Jọn Onye Na-eme Baptizim ziri anyị ka anyị bịakwute gị, sị, ‘Ọ̀ bụ gị bụ Onye ahụ nke Na-abịa, ka ànyị ga-atụwa anya onye ọzọ?’”
21 N’oge awa ahụ, ọ gwọrọ ọtụtụ ndị nwere ọrịa+ na ajọ ọrịa dị iche iche na mmụọ ọjọọ, mekwaara ọtụtụ ndị ìsì amara ka ha hụwa ụzọ,
22 O wee zaa mmadụ abụọ ahụ, sị: “Gaanụ+ kọọrọ Jọn ihe unu hụrụ na ihe unu nụrụ: ndị ìsì+ na-ahụ ụzọ, ndị ngwọrọ na-eje ije, a na-eme ka ndị ekpenta dị ọcha, ndị ntị chiri na-anụkwa ihe, a na-akpọlitekwa ndị nwụrụ anwụ, a na-ezikwa+ ndị ogbenye ozi ọma.+
23 Obi ụtọ na-adịkwara onye ahụ nke na-asụghị ngọngọ n’ihi m.”+
24 Mgbe ndị ozi Jọn lawara, ọ malitere ịgwa ìgwè mmadụ ahụ banyere Jọn, sị: “Gịnị ka unu gara n’ala ịkpa ịhụ? Ọ̀ bụ ahịhịa amị nke ifufe na-ebugharị?+
25 Gịnịzi ka unu gara ịhụ? Ọ̀ bụ onye yi uwe elu dị yọrịị?+ N’ezie, ndị yi uwe mara mma ma na-ebi ndụ okomoko nọ n’ụlọ ndị eze.+
26 Gịnịkwanụ ka unu gara ịhụ? Ọ̀ bụ onye amụma?+ Ee, ana m asị unu, ọ bụ onye karịrị nnọọ onye amụma.+
27 Onye a bụ onye ahụ e dere banyere ya, sị, ‘Lee! M na-ezipụ onye ozi m n’ihu gị,+ bụ́ onye ga-akwadebe ụzọ gị tupu gị abịa.’+
28 Ana m asị unu, N’etiti ndị ụmụ nwaanyị mụrụ, ọ dịghị onye ọ bụla ka Jọn ukwuu;+ ma onye ka nta n’alaeze Chineke ka ya ukwuu.”+
29 (Mgbe mmadụ niile na ndị ọnaụtụ nụrụ ya, ha kwuru na Chineke bụ onye ezi omume,+ ebe ọ bụ na e mere ha baptizim ahụ Jọn na-eme.+
30 Ma ndị Farisii na ndị maara Iwu ahụ ledara ndụmọdụ+ Chineke nyere ha anya, ebe ọ bụ na o meghị ha baptizim.)
31 “Ya mere, ole ndị ka m ga-eji ndị ọgbọ a tụnyere, ole ndị ka ha yikwara?+
32 Ha yiri ụmụntakịrị nọ ọdụ n’ọma ahịa na-etiku ibe ha, bụ́ ndị na-asịkwa, ‘Anyị gbuuru unu ọjà, ma unu agbaghị egwú; anyị tiri mkpu arịrị, ma unu akwaghị ákwá.’+
33 N’otu aka ahụ, Jọn Onye Na-eme Baptizim bịara, ọ naghị eri achịcha, ọ naghịkwa aṅụ mmanya, ma unu na-asị, ‘Mmụọ ọjọọ ji ya.’+
34 Nwa nke mmadụ bịara na-eri ihe, na-aṅụkwa ihe ọṅụṅụ, ma unu na-asị, ‘Lee! Ọ bụ onye na-eri oké nri, nke na-aṅụkwa oké mmanya, enyi ndị ọnaụtụ na ndị mmehie!’+
35 Ka o sina dị, a na-egosi na amamihe+ ziri ezi site n’ụmụ ya niile.”+
36 Ma otu onye n’ime ndị Farisii nọ na-arịọ ya ka o soro ya rie nri. N’ihi ya, ọ banyere n’ụlọ+ onye Farisii ahụ wee nọdụ na-eri ihe na tebụl.
37 Ma, lee! otu nwaanyị nke a maara n’obodo ahụ na ọ bụ onye mmehie matara na ọ nọ na-eri ihe n’ụlọ onye Farisii ahụ, o wee weta mkpọ̀ alabasta+ mmanụ nke na-esi ísì ụtọ,
38 ọ nọdụrụ n’azụ, n’akụkụ ụkwụ ya, na-akwa ákwá ma malite iji anya mmiri ya na-ede ụkwụ ya, o jikwa ntutu isi ya na-ehicha ha. O jikwa nwayọọ susuo ụkwụ ya ọnụ ma tee ha mmanụ ahụ na-esi ísì ụtọ.
39 Mgbe onye Farisii ahụ nke kpọrọ ya òkù hụrụ nke a, o chere, sị: “A sị na nwoke a bụ onye amụma,+ ọ gaara ama onye na-ebitụ ya aka, marakwa ụdị nwaanyị ọ bụ, na ọ bụ onye mmehie.”+
40 Ma Jizọs zara ya, sị: “Saịmọn, enwere m ihe m ga-agwa gị.” O wee sị: “Onye Ozizi, kwuwe!”
41 “Mmadụ abụọ ji otu onye na-agbazinye mmadụ ego ụgwọ; otu onye ji ụgwọ narị mkpụrụ ego dinarịọs ise,+ ma onye nke ọzọ ji iri ise.
42 Mgbe ha na-enweghị ihe ọ bụla ha ga-eji kwụọ ụgwọ ha ji, ọ gbaghaara+ ha abụọ kpamkpam. Ònye n’ime ha ga-ahụ ya n’anya karị?”
43 Saịmọn zara, sị: “Echere m na ọ bụ onye ahụ ọ gbaghaara ego ka ukwuu kpamkpam.” O wee sị ya: “Ị zatara ya.”
44 O wee tụgharịa lee nwaanyị ahụ anya, sị Saịmọn: “Ị̀ hụrụ nwaanyị a? Abatara m n’ụlọ gị; i nyeghị m mmiri+ ka m saa ụkwụ. Ma nwaanyị a ji anya mmiri ya dee ụkwụ m, jirikwa ntutu isi ya hichaa ha.
45 I susughị m ọnụ;+ ma malite n’oge awa m batara nwaanyị a ahapụghị iji nwayọọ susuo ụkwụ m ọnụ.
46 I teghị isi m mmanụ;+ ma nwaanyị a tere ụkwụ m mmanụ na-esi ísì ụtọ.
47 N’ihi nke a, ana m asị gị, a gbagharawo ya mmehie ya n’agbanyeghị na ha dị ọtụtụ,+ n’ihi na o gosiri ịhụnanya dị ukwuu; ma onye a gbaghaara ihe dị nta, na-egosi ịhụnanya dị nta.”
48 O wee sị nwaanyị ahụ: “A gbagharawo gị mmehie gị.”+
49 Ndị ha na ya nọ na-eri ihe na tebụl wee malite iche, sị: “Ònye bụ onye a nke na-agbaghara mmehie?”+
50 Ma ọ sịrị nwaanyị ahụ: “Okwukwe gị azọpụtawo gị;+ lawa n’udo.”+
mailto:?body=Nọrọ Ebe A Gụọ Baịbụl%0a%0ahttps%3A%2F%2Fwww.jw.org%2Ffinder%3Fdocid%3D1011452%26Book%3D42%26Chapter%3D7%26wtlocale%3DIB%26srcid=share⊂ject=Nọrọ Ebe A Gụọ Baịbụl